[RASMI] xidhmo dr.fone - Transfer macruufka WhatsApp, kaabta & celi
dr.fone xidhmo - macruufka WhatsApp Transfer, kaabta & celi
Taabta Your WhatsApp Chat, si fudud & furfurmi
Bedelka macruufka WhatsApp in ay iPhone / iPad / iPod taabashada / qalabka Android.
fariimaha ee kaabta ama dhoofinta macruufka WhatsApp in kombiyuutarada.
Soo Celinta gurmad macruufka WhatsApp in ay iPhone, iPad, iPod taabashada iyo qalabka Android.
Bedelka WhatsApp History Effortlessly iyo Xulo
No arrinta aad leedahay qalab wax ka badan hal ama aad doonayso in aad bedesho qalab duug ah mid cusub, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka si aad u eegista wareejiyo taariikhda chat WhatsApp u dhexeeya aad iPhone iyo iPad. Ka dib markii iska beddelka qalab Android, waxa kale oo ku caawin kara si ay u gudbiyaan sheekaysiga WhatsApp ka iPhone / iPad in qalab cusub Android aad. item kasta oo aad rabto in aad, oo ay ku jiraan ku lifaaqan.
Bedelka Messages WhatsApp Xulo
Waxaad ka qalab macruufka wareejin karaan farriimo WhatsApp in macruufka ama qalabka Android eegista.
Kaabta Messages WhatsApp fudud
Waxaad fariimaha kartaan gurmad WhatsApp on your iPhone / iPad in computer la mid click.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh WhatsApp kaabta Content
Waxaad ka akhrisan kartaa dhammaan faahfaahinta in aad file gurmad WhatsApp, sida farriimaha iyo lifaaqyada. View waxa aad rabto.
Messages Dhoofinta ka kaabta WhatsApp
Waxaad eegista dhoofin kartaa fariimaha ka gurmad WhatsApp sida file HTML ah. Waa wax fiican in aad daabacdo ama la wadaagno.
Soo Celinta kaabta WhatsApp
Sida loo soo celiyo fariimo WhatsApp, waxaad u soo celin kartaa in macruufka ah iyo qalabka Android labadaba. Waa shaqo hal click ah.
Tani gurmad WhatsApp iyo soo celiyo barnaamijka si buuxda u akhri-keliya software. Waxaa sii haysan maayo, wax ka beddelo ama daadato xog kasta oo ku saabsan qalab aad ama file ah gurmad. Waxaan qaadan xogta shakhsiga ah iyo warsan dhab ah. Waxaad had iyo jeer tahay qofka keliya waxaa ka heli kartaa.
Kaabta ama dhoofinta hadaladii WhatsApp
Waxay ka dhigaysa gurmad taariikhda WhatsApp aad inta badan ka sahlan ka badan abid. Ku xiridda aad iPhone / iPad iyo fulinta ka mid click, gurmad u shaqeeyo keligeed. Ka sokow, waxaad ku eegaan karo iyo hubi wax kasta oo aad rabto iyo waxa ay dhoofin in aad computer sida file HTML ah reading ama daabacaadda.
Soo Celinta WhatsApp kaabta in macruufka / Android Qalabka
Isagoo ka hadlayay of WhatsApp ee files raad raac ah, waxaad iyaga ka your computer tirtiri kartaa haddii aadan rabin si ay u sii, oo waxaad ku soo celin kartaa qalabka iPhone / iPad ama Android marka ay jirto baahi noocan oo kale ah. Waxaa la samayn karaa hal click.
100% software ammaan ah, oo innaba waxyeello ma in aad computer ama qalab.
Waxaad isku dayi kartaa software ah oo lacag la'aan ah muddo 30 maalmood ah.
qalabka macruufka taageerayaan
Taageerayaan WhatsApp Files
Qof kasta oo ku lifaaqan file
macruufka 10, macruufka 9 oo hore
xidhmo dr.fone Igu caawi inaan si guul leh loo wareejiyay xogta WhatsApp ka jir Phone Android aan iPhone SE cusub.
xidhmo dr.fone waa codsi ah oo khibrad leh oo loogu talagalay inuu ka soo kabsado files ka qalab Android si toos ah kabsado SMS tirtiray iyo xiriirada, oo ay ku jiraan magacyada, lambarrada iyo cinwaanada e-mail, si ay u dhoofiyaan si HTML, iyo sidoo kale sawiro iyo video waayay tirtirka.
May Kim, macruufka
Ku qanaca software waa mid aad u wanaagsan soo celiyo data WhatsApp.
Kaabta Messages WhatsApp Online on Android iyo iPhone
Sida loo soo celi Messages WhatsApp on iPhone iyo Android Qalabka
Sidee inuu ka soo kabsado Images tirtiray WhatsApp / Sawiro
Sida loo soo ceshano fariimaha WhatsApp on iPhone
WhatsApp shawladda kaabta: Read hadaladii WhatsApp on your Computer
6 Siyaabaha Messages WhatsApp kaabta
Furfurmi gurmad & celin CHAT viber on your iPhone, iPad, ama computer.